စိတ်ကူးထဲက အသစ်များ: November 2009
ဒီလထဲမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ။ အကြိုက်ဆုံး စာသားလေးကတော့ မင်းရှိတဲ့ချိန်အဆုံးအစမဲ့ ပျော်ဘူးခဲ့ တို့အားနည်းချက်က သိပ်ချစ်နေလို့ ဆိုတာပါပဲ ။ ခံစားချက်တွေ တိုက်ဆိုင်တိုင်းသီချင်းလေးတွေ သိမ်းထားမိတာအကျင့်တစ်ခု လို ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးရင် တစ်ယောက်သောသူကို သတိရမိတာကတော့ မညာပါဘူး ၀န်ခံပါတယ် ။
Posted by သစ်သစ် at 5:40 PM6comments
နိုဝင်ဘာတစ်လလုံး စာရေးကြဲတာထက် ရေးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ။ ငါဘာလို့ဘလော့ဆိုတာလေး ရေးမိခဲ့ပါလိမ့်လို့လည်း နောင်တကရချင်ချင် ဖြစ်နေပါပြီ ။ ရေးစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် စိတ်တွေ့တိုင်းရေးခွင့်ကလည်း မသာပါဘူး ။ ကိုယ်ကရင်ဖွင့်ချင်လို့ ပါစင်နယ်တွေရေးပေမယ့် ကိုယ်ရေးတာကို နှိပ်ကွက်လို့သဘောထားပြီး အခွင့်ရတာနဲ့ ပြန်ဖော်ချင်တဲ့သူကလည်း များလာသလိုပါပဲ ။ စရေးကတည်းကိုက ငယ်စဉ်ကကိုယ့်မိသားစုအကြောင်း ကျောင်းတုန်းကအကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း အလုပ်အကြောင်း မှိန်တိန်တိန်အချစ်အကြောင်း နိမ့်ပါးလွန်းတဲ့ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း စသဖြင့် ရောက်တတ်ရာရာရေးမယ်လို့ပဲ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ ။ ဘာကြီးညာကြီး ရေးမယ်ဆိုပြီး ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်း အလျင်းမရှိပါဘူး ။ မနာလိုမုန်းထား ရန်သူလည်းမလိုချင်ပါဘူး ။ စာတွေရေးနေလို့ကိုယ့်ကိုခင်မင်နှစ်လိုတဲ့သူပဲ လိုချင်တာ သဘာဝပါ ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်နဲ့ဆိုပေမယ့် လူဆိုတာကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာဆိုတော့ တာဝန်အရဖြေရှင်းရပြန်ရောလေ မပြောပြန်ရင်လည်း ကြာလာတော့အမှားက အမှန်ကိုထင်မြင်သွားတတ်တယ်လေ ။ သစ်သစ်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပါတယ် အထူးသဖြင့် ဝေးတမြေမှာနေတော့ ပိုလို့တောင်ဂရုစိုက်ရပါသေးတယ် ။ ကောင်းသတင်းရောက်ဖို့က ကြာကောင်းကြာပေမယ့် မကောင်းသတင်းရောက်ဖို့က အရမ်းမြန်ပါတယ် ။ ဒီလိုဂရုစိုက်ပါများတော့လည်း လုပ်ငန်းခွင်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပါ ထိခိုက်လာတာမဆန်းပါဘူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့ဒီအပတ်ဆို သစ်သစ်ကိုယ့်ဘလော့တောင် မဖွင့်ဖြစ်ပါဘူး ။ သစ်သစ်သွားနေကျ ဘလော့စီဘောက်လေးရှိတယ် အဲဒီမှာပဲပြောနေ ချက်နေ စိတ်အပန်းဖြေတာပါ ။ အလုပ်လုပ်ရင်းဝင်ပြောသလို ၈ယောက်လောက်ရှိတဲ့အဲဒီစီဘောက်မှာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးရအောင် စကြပြောင်ကြနေတာကိုယ်က ဂျီတော့မလို ဘလော့မလိုအောင်ပါပဲ ။
ဟိုး တပတ်ကကိုယ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ကိုယ်တွေနဲ့မသွားချင် မတွေ့ချင်တဲ့ပုံ ဆက်ဆံတာခံလိုက်ရပြီးကတည်း တော်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာလည်း တတ်နိုင်သလောက်နေတတ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ စိတ်ဆိုးခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်းတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာတည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားရင်းအပြောင်းအလဲများတတ်တဲ့ လောကကြီးကခဏလောက် ပုန်းနေခဲ့လိုက်ပါသေးတယ် ။ စာတွေကိုဖိဖတ်လို့ လူတွေနဲ့ဝေးရာမှာ နေရတာလည်း အရသာတစ်မျိုးပါပဲ ဒါပေမယ့် ကြာရှည်ကြတော့လည်း ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးလေ ။ ဒါကြောင့် လူဆိုတာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့နေတာလို့ ပြောခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့ ။ ခုလည်း မဖြစ်မနေပွဲတွေကလွဲလို့ အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဘေးကနေ ရှောင်ခွာပြီးနေဖို့ ကြိုးစားနေပြန်တယ်လေ ။ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုနှစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ပြောလည်း မမှားပါဘူးလေ ။
ဒီတစ်ပတ်လုံး အလုပ်ကလည်း မနက် ၈ ည ၈ ဆိုရလောက်အောင်ကို အလုပ်များခဲ့တယ် နောက်အပတ်လည်း များဦးမှာပါပဲ တမျိုးကောင်းတာက စိတ်မလွင့်ဘူး မကောင်းတာက တနင်္လာနေ့ကတည်းကဖျားနေလိုက်တာ ကြာသပတေးလောက်ရောက်မှ အရှင်းပျောက်သွားတာပဲ ။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ၁နာရီကိုတောင် နာရီဝက်ပဲနားပြီး နာရီဝက်အိုဗာတိုင်ဆင်းပလိုက်တယ် အေးရော....။ ပိတ်ရက်၃ရက်ကိုလည်း အခန်းထဲမှာဖတ်ဖို့အကြွေးကျန်တဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်ရင်းဖြတ်သန်းမယ်စဉ်းစားထားပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးအရ လူတွေနဲ့မတွေ့ချင်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်နေတယ်ဆို ပိုမှန်မယ်ထင်တယ် ။ ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို နှမြောခြင်းကင်းပေမယ့် ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိချင်တဲ့စိတ်ပေါက်နေတယ် ။ သစ်သစ်ကိုယ် သစ်သစ်လည်း အားမရဘူး ကြိုးစားအားထုတ်မှု ညံ့ဖျင်းနေတယ်လို့ ခံစားမိနေတယ် ။ ခုလည်းမရေးတာကြာတော့ သစ်သစ်တစ်ယောက် ဘယ်ပျောက်နေလဲဆိုပြီး နေ့စဉ်လာလာတတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း တောင်းပန်ရင်း စိတ်ထဲရှိရာအစီအစဉ်မကျ ချရေးလိုက်မိပြန်ပြီလေ ။ ဒီပို့စ်လေးက ဘာအကျိုးမှမပြုပေမယ့် ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ ခုတလောရင်တွင်းခံစားမှုကို မြင်သာလိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် ။ လာဖတ်သူများကို အစဉ်အမြဲလေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ် ။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော် ။
Posted by သစ်သစ် at 4:24 PM6comments
ဒီနေ့ သစ်ချစ်သူငယ်ချင်းနန္ဒာရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သစ်သစ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ် ။ သစ်အကြောင်းတော်တော်များများသူသိသလို သူ့စိတ်တော်တော်များများလည်း သစ်ဖတ်မိပါတယ် ။ လှိုင်း နဲ့ ပင်လယ်လို ရေပြင်ကျယ်မှာမျှောနေရတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ စိတ်တူကိုယ်တူ ဘ၀အမောတွေမျှဝေခံစားခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။
ဂျီတီအိုင်စတက်ကတည်းက အုပ်စုလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ရှိခဲ့တာ ဘီတက်ခ်ျကိုတက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်စီပါလာကြပြီး ပေါင်းစည်းလာခဲ့ကြတွေသူတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူးလေ ။ ကျောင်းအတူတက် ကျောင်းအတူပြေး စာမသင်ချင်လို့အခန်းပြင်မှာထွက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးဖော်ဆိုးဖက်လို့ပြောရင်လည်း မမှားခဲ့ပါဘူး ။ ပုံစံကြည့်ရင်တော့အေးသလိုလိုနဲ့ သူလည်းငပွေးပါပဲလေ...ဟိ ။
ဘီအီးတက်တော့လည်း ပေကြောင်ကြောင်နဲ့ ဒီနှစ်ယောက်တွဲဖြစ်တာမဆန်းပါဘူးလေ ။ ကျောင်းတွေပြီးလို့ သင်တန်းတွေတက်တုန်းကလည်း အတူတူပါပဲ ။ သူမုတ္တမ-မော်လမြိုင်တံတားကြီးမှာ သွားလုပ်တော့မှ ကွဲသွားကြတာ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လို့ နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လည်း တတွဲတွဲပါပဲလေ ။ နန္ဒာရေ နင်တော့မသိဘူး ငါနဲ့ဆွေညွန့်နဲ့ နင့်ကိုသိမ်ကြီးဈေးနားမှာ ကားပေါ်မတက်ခင်အထိ လက်ချာပေးခဲ့တာတွေကတော့ အမှတ်ရဆဲပါဟာ ။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ငါတို့တွေလင်းလက်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပုံဖော်ခဲ့တာလည်း အမှတ်တရပါပဲ ။ နင် နဲ့ ဆွေညွန့် အဓိဌာန်ကျောက်တုံးတွေမခဲ့တာကိုလည်း ခုထိမျက်ဝန်းမှာ မြင်ယောင်နေဆဲပါ ။
ဘာလိုလိုနဲ့ နင်မွေးနေ့တစ်နှစ်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီနော် ။ မွန်းကြပ်နေတဲ့ ဒီလောကကြီးကနေ ငါတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ဆီကို မဆုတ်မနစ်နဲ့ ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲလျှောက်လို့ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ော် ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ သူငယ်ချင်း...။
Posted by သစ်သစ် at 4:27 PM 1 comments
နေညိုရင် တို့ဝေးရမယ် သိထားလည်း
အလှဆုံးမင်းရဲ့ မျက်ဝန်းက မိုးတွေစွေဦးမလား
တကယ်တော့ ဒီစာသားတွေကို သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ။ တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး နေ့ရော ညပါ နားထောင်နေမိတယ် ။ သီချင်းလေးဆုံးသွားတိုင်း ရင်ထဲမှာ ဟာ ပြီးကျန်ခဲ့တယ် သူရယ်...... ။
Posted by သစ်သစ် at 2:21 PM 10 comments
မနှစ်က ဒီလိုချိန်လေးမှာ သစ် မြန်မာပြည်ပြန်တော့မှာပေါ့နော် ...။ ဒီနှစ်တော့ မပြန်နိုင်တော့ မနှစ်ကသွားခဲ့တဲ့ ခရီးလေးကိုပဲ စမြုံ့ပြန်ရင်းလွမ်းမောတသလိုက်ပါဦးမယ်လေ ။ ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကိုပဲ အရောက်သွားခဲ့မိတာပေါ့လေ ။ မေမေရဲ့မွေးရပ် ဇာတိဖြစ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ဟာ သစ်သစ်တို့မောင်နှစ်မတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှမစိမ်းခဲ့ပါဘူး ။ ဒီလိုပြောရခြင်းကလည်း ဖေဖေ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ဒေသကို ၁ခေါက်ပဲရောက်ဖူးခဲ့လို့ပါပဲ...။
သစ်သစ်အစ်ကိုများဟာ ဘားအံမှာတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျ မြ၀တီမှာတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျဆိုတော့ သစ်သစ်တို့ကရင်ပြည်နဲ့ ကင်းကွာလို့မရတော့ပါဘူး ။ သံယောဇဉ်အမျှင်လေးများဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေက အဲဒီအရပ်ဒေသတွေမှာ နေတော့ သွားရပြီပေါ့လေ ။ ရန်ကုန် ဘားအံလမ်းကတော့ အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လိုပါပဲ သွားနေကျဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်ကအဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ အိပ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီး အသားကုန်ကိုအိပ်နေတော့တာပါပဲလေ ။ ပဲခူးလောက်အထိကတော့ ကင်မရာအစုတ်လေး တ၀င့်ဝင့်နဲ့ပေါ့လေ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဖုန်ထူလွန်းလို့ ကားမှန်တင်ပြီးအိပ်လိုက်တာဆိုတာ အစ်ကိုကြီးကကားမောင်းရင်းကိုယ့်ကိုယ်နှိုးမှ နိုးတော့တယ်လေ ။
ထမင်းစားတဲ့နေရာရောက်တော့ ကိုယ်အိပ်လို့သူတို့က ဆက်မောင်းတယ် ကိုယ်နိုးလာတော့ဗိုက်ဆာတယ် အသားကုန်အော်နေလို့ အစ်ကိုကြီးက သူတို့စားနေကျ ကားကြီးသမားတွေစားတဲ့ဆိုင်မှာ ရပ်ပေးရတယ်လေ ။ ကားပေါ်တက်ပြီးပြန်အိပ်လိုက်တာ သံလွင်တံတားရောက်မှ ပြန်နိုးတော့တယ် ။ မထလို့လည်းမရတော့ဘူး အမေဆူတော့မယ်လေ...ဟိဟိ ။
ဘားအံရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ကျတော့ မြ၀တီကအစ်ကိုက သူ့သားလေးနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ် ပြီးတော့ သစ်သစ်ကိုမြ၀တီကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်ပါတော့တယ် ။ ဘယ်နေ့ရန်ကုန်အရောက်လို့စဉ်းစားထားတဲ့ သစ်သစ်ကတကယ်ဆိုရင် မလိုက်ချင်တော့ပါဘူး ။ ယာဉ်တန်းအတက်အဆင်းတွေနဲ့ဆို ၂ရက်လောက်ကတော့ အသာလေးပဲလေ ။ ဒါပေမယ့်အမေက နင့်အစ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်လိုက်သွားဆိုတော့ ဒေါနတောင်တန်းရဲ့ ရင်ခွင်ကိုခဏခိုဝင် ခဲ့ရတာပေါ့နော် ။
ဘားအံကနေ နေ့လည်၁၁နာရီလောက်ထွက်လိုက်တာ အစ်ကိုငယ်ကဘယ်မှာမှမနားပဲ ကော့ကရိတ်အရောက်ကို မောင်းခဲ့တော့တာပဲလေ ။ ယာဉ်တန်းအတက်ကိုသူမှီချင်တယ်လေ ကော့ကရိတ်ရောက်တော့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထမင်းစား ပြီးတော့စားချင်တဲ့ဟာတွေဝယ် အအေး ၊ နေကြာစေ့ ၊ မုန့်တွေ ၀ယ်တဲ့ ယာဉ်တန်းပိတ်ရင် ကြာတတ်တယ်တဲ့ လိုတာဝယ်ထားဆိုတော့ သစ်သစ်တစ်ယောက်စိုးရိမ်ကြီးပြီး ၀ယ်တော့တာပဲလေ ။ အစ်ကို့သားလေးပါတော့ ကလေးအတွက်အဓိက ရေသန့်ဗူးတွေပေါ့နော် ။ နောက် ကျွပ်ကျွပ်အိတ်တွေရောပဲပေါ့ ။ တစ်ခါတစ်လေ လမ်းပိတ်ရင် ၂ရက်လောက်ကြာတတ်တယ်လေ ။ ဒီလိုနဲ့ဖုန်တသောသောလမ်းကို အစ်ကိုတစ်ယောက် ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းလို့ တောင်တက်လမ်းတွေစတင်ခဲ့တယ်လေ ။
သစ်သစ် အစ်ကိုငယ်ကကားမောင်းရင် ကွမ်းလေးငုံပြီး ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောတော့ပါဘူး ။ ကားကိုလည်း မြှားတစ်စင်းလိုပဲ မောင်းတာတအားမြန်ပါတယ် ။ အဖေနဲ့ဆို ကားမောင်းမြန်တာအမြဲရန်ဖြစ်နေကြလေ ။ ခုတော့သူ့သားလေးပါတော့ သစ်က ကိုငယ်ရယ် ဖြည်းဖြည်းကလေးကားမူးမယ်ဆိုပြီး ထိန်းရတယ် ။ တကယ်တော့ဟိုးအရင်တုန်းကဆို သစ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအစ်ကိုတွေမောင်းတာ သဘောကျတဲ့သူလေ ခုတော့မစီးတာကြာတော့ သစ်ကိုယ်တိုင်ကြောက်မိတာအမှန်ပဲလေ ။ ဒီလိုနဲ့တောင်တွေရဲ့အကွေ့လမ်းတွေကို ကျင်လည်စွာမောင်းရင်း တောင်ကမ်းပါးယံတွေကို တပ်မတော်သားတွေက လမ်းချဲ့ဖို့ဖြိုချနေလို့ ၃နာရီလောက်လမ်းပိတ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ သစ်လည်းအညောင်းပြေအညာပြေ တူလေးကိုလက်ဆွဲပြီး အောက်ဆင်းမယ်လုပ်တော့ ကိုငယ်ကဆင်းခွင့်မပေးပါဘူး ။
မတ်စောက်တဲ့တောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကုန်ကားတွေ ဟိုင်းလတ်တွေ ဆိုင်ကယ်တွေ စလွန်းကားတွေဟာ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ် ။ ဆိုင်ကယ်အိတ်ဇောသံတွေမပြဲပြဲနဲ့ လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလှယ်ထားတဲ့ အုပ်စုတွေ ကြိုးမဲ့စကားပြောစက်တွေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေ မှောင်ခိုကုန်ကူးနေတဲ့သူတွေ အိုး...လူတွေဆိုတာ စုံနေတာပါပဲ ။ အလွှာစုံကဘ၀အမောတွေကို သူတို့တွေရဲ့မျက်နှာမှာ အထင်းသားမြင်နေရတယ်လေ ။ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေကလည်း သေနတ်ကြီးတွေတကားကားနဲ့ပေါ့ ။ သစ်သစ်လည်း အစ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့ အောက်မဆင်းတော့ပဲ မျက်စိမလွှဲနိုင်လောက်အောင်လှပတဲ့ ဒေါနတောင်တန်းကြီးကိုလာ လွမ်းဆွတ်စွာကြည့်နေမိတော့တယ် ။
အစောင်းလမ်းတွေပေါ်မှာ ကုန်တင်ကားကြီးတွေကုန်အပြည့်နဲ့ ငယ်သံပါအောင် အော်ပြီးတက်နေတာကို ကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာသူတို့သာ စကားပြောတတ်ခဲ့ရင် ပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပဲလို့လဲ တွေးနေမိခဲ့တယ် ။ အစ်ကိုငယ်ကိုလည်း ကားကိုကိုယ်တိုင်မမောင်းဖို့ လိုက်ရင်လည်းကားပေါ်ကမလိုက်ပဲ ဆိုင်ကယ်နဲ့သာလိုက်ဖို့ ကုန်ကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့တာတင်ဖို့ လောဘမတတ်ဖို့ တတွတ်တွတ်မှာနေမိတော့တယ် ။ အစ်ကိုငယ်က သစ်သစ်ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲ အစ်ကို့မျက်နှာမှာ ရှားပါးလှတဲ့အပြုံးတစ်ပွင့်ကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရတယ်လေ ။ ဒီလိုနဲ့အာရှလမ်းမကြီးဆိုတဲ့ ခြောက်လမ်းသွားလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တော့ မြ၀တီနယ်စပ်မြို့လေးကို ချဉ်းကပ်မိရဲ့သားဖြစ်နေခဲ့ပြီလေ ။
မြို့အ၀င်က နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုလည်း ထည်ထည်ဝါ၀ါကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ အစ်ကိုကအိမ်ကိုတန်းမောင်းတော့ အစ်ကို့ကိုကားထားတဲ့နေရာ ခဏလောက်လိုက်ပို့ဖို့ ပြောလိုက်မိတယ် ။ အစ်ကိုနားတော့လေဆိုတော့ စိတ်ကအ၇မ်းအဲဒီကိုသွားချင်နေတယ်လေ ။ ကုန်တင်နေတဲ့ကားဝင်းကိုရောက်တော့ သစ်သစ်လက်စုံမိုးပြီးပြီး ကားတွေကိုစိတ်ထဲကနေ ရည်မှန်းကန်တော့ခဲ့မိတယ် ။ အစ်ကိုငယ်ကလည်း ညီမလေးဘ၀တလျှောက်လုံး လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုတဲ့ စကားလေးက သစ်သစ်ကိုတကယ်ထိပါတယ် ။ ကားမောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးတွေ စပယ်ယာတွေကလည်း ဟဲ့...ပြန်လာတာလားဟေ့ ဆိုပြီး ဆင်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြတော့ သစ်သစ်ရင်ထဲကိုယ့်သွေးသားတွေတွေ့သလိုပဲ ပျော်သွားမိတယ် ။ သစ်သစ်ကမုန့်ဖိုးတွေပေးတော့ ဘယ်လောက်မှမများတဲ့ပမာဏကို မက်မက်မောမော တန်ဖိုးထားပြီးယူကြတယ်လေ ။ သစ်သစ်က ကားတွေကိုလမ်းမှာဂရုစိုက်ဖို့ ကျန်းမာရေးတွေဂရုစိုက်ဖို့ ပြောပြီးအစ်ကို့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ် ။
နောက်နေ့မနက် ယောင်းမကဆိုင်ကယ်တပြင်ပြင်နဲ့ အပြင်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ် ။ သစ်သစ်ကတော့လိုက်ချင်စိတ်ကိုမရှိပဲ ယာဉ်တန်းအဆင်းဆိုတော့ ကားတွေဆီကိုပဲသွားရင်း လိုအပ်တာတွေ ကူညီနေမိတယ် ။ ယောင်းမလည်းနောက်ဆုံးတော့ လက်ဆောင်တွေသူ့ဘာသာဝယ်ပြီး သစ်အတွက်စီစဉ်နေတော့တယ်လေ ။ နောက်နေ့ယာဉ်တန်းနဲ့ပြန်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ အစ်ကိုငယ်ကိုလည်း ဒီယာဉ်တန်းနဲ့ပဲ ကားတွေကြည့်ရင်းပြန်မယ်ဆိုတော့ သစ်သစ်ဆန္ဒအတိုင်း မငြီးငြူပဲပြန်လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ် ။
ဘားအံအိမ်ကိုရောက်တော့ အမေ့ကိုပြောပြရင်း တညတာခိုလှုံခဲ့တဲ့ မြ၀တီမြို့ရယ် တခဏတာရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒေါနတောင်တန်းရယ်ကို သတိတွေရနေမိတဲ့အပြင် ကျရာနေရာမှာပျော်ပြီး နိုင်ငံခြားဆိုတာ နတ်ပြည်လိုထင်နေတဲ့ ရိုးသားတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင် ကားမောင်းတဲ့ကရင်ဘကြီးတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်း တွေးတောအောက်မေ့နေမိပါတော့တယ် ။ ရန်ကုန်အပြန်လမ်းမှာ အသံတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညီမငယ်ကို အစ်ကိုကြီးကတောင် မေးယူရလောက်အောင်ကို သစ်သစ်တစ်ယောက် အတွေးတွေပွားနေမိပါတော့တယ် ။ ခရီးစဉ်လေးက ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် အရင်ကမတွေးဖူးခဲ့တဲ့ အတွေးသစ်တော်တော်များများကို သစ်သစ်တွေးခဲ့မိတဲ့အပြင် အရင်ကလိုအမြင်မတူတော့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်း သိသိသာသာကြီး သတိထားမိခဲ့ပါတော့တယ်..။
Posted by သစ်သစ် at 9:14 AM6comments
စိတ် သည် အလွန်ထိန်းသိမ်းရ ခက်သောအရာ တစ်ခုဖြစ်သည် ။ မလုပ်ချင်တာကို လုပ်ချင်လာအောင် ချော့ရတာလည်း ဒီစိတ်ပါပဲ ။ လမ်းချော်တတ်လွန်းလို့ ထိန်းရတာလည်း ဒီစိတ်ပါပဲ ။ တခါတရံလွှတ်ပေးလိုက်သော် အမှားများစွာတွေ့တာလည်း ဒီစိတ်ပါပဲ ။ တခါတရံ စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း လိုက်ခြင်းသည် တခဏတာအတွက် ကောင်းသော်လည်း ရေရှည်အတွက်မူ မကောင်းတတ်တာလည်း ဒီစိတ်ပဲလေ ..။
ဒီစိတ်တွေအကြောင်းရေးလို့ သစ်သစ်ကို စိတ်ဖောက်သွားပြီ မထင်ပါနဲ့ဦး ။ ခံစားချက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဒီစိတ်ကို သတိထားမိနေတာလည်း ကြာပါပြီ ။ ဒီစိတ်သည် လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို လျော့နိုင်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ။ တန်ဖိုးတက်အောင်လည်း သူလုပ်တတ်ပြန်တယ် ။ အချစ်ဆိုတာကို စခံစားတာလည်း ဒီစိတ်ဖြစ်သလိုပဲ မုန်းတဲ့စိတ်ကို မြည်းစမ်းသွားတာလည်း ဒီစိတ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ် ။
အချို့သူများသည် အနီးကပ်ဆုံးသူကို တန်ဖိုးထားလေ့ မရှိကြပါဘူး ။ ထိုသူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူရှုတတ်ကြပြန်တယ် ။ ဒါတွေကလည်း ထိုသူ၏စိတ်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်သွားတယ်လို့ သစ်ထင်ပါတယ် ။ စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခံစားရရင် ဖယ်ရှားရခက်နေသလို နောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း ဒါတွေပြန်ခံစားစေတာလည်း စိတ်ပဲလေ ။ ဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အလိုမလိုက်မိအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့က ကာယကံရှင်ပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတော့တယ်လေ...။
Posted by သစ်သစ် at 2:28 PM7comments
မနေ့က အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောတော့ မေမေက ဒေါ်ဝင်း ဆုံးရှာပြီတဲ့ ရင်ထဲတော်တော်မကောင်း ဖြစ်သွားမိတယ် ။ ဒါနဲ့ သစ်သစ်ရန်ကုန်က ထွက်မလာခင် ကနေ အခုချိန်ထိ ရပ်ကွက်ထဲက တော်တော်များများ ဆုံးပါးသွားကြတာကို စဉ်းစားမိပြီး ဒီပို့စ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါ ။
ဒေါ်ဝင်း ဆိုတာ သစ်သစ်တို့ အိမ်နဲ့နှစ်အိမ်ကျော်က မုန့်ဟင်းခါးရောင်းတဲ့ အဘွားပါ ။ သစ်သစ်ငယ်စဉ်ကတည်းက ရောင်းလာလိုက်တာ စလုံးမထွက်ခင် အထိပါပဲ ။ မိုးလင်းရင် ဘွားဆိုပြီးပန်းကန်လေးနဲ့ ရောက်သွားတာနဲ့ ဘူးသီးကြော်နဲ့တစ်ပွဲထည့်ပေးပါတယ် ။ အိမ်ကိုယူလာပြီး ထမင်းတွေထည့်စား အရည်ကပျစ်သွားပြီဆို ဘွားဆိုပြီးဆိုင်မှာ ထပ်တောင်းလည်း ထပ်ထည့်ပေးနေကြလေ ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆို သစ်တို့လမ်းမှာ အားကစားပွဲတွေ ရှိပါတယ် ။ ကလေးတွေကလည်း ကလေးမို့လို့ ဆော့ကြတယ်ပေါ့နော် ။ စကောရွက်ပြိုင်ချင်တဲ့ သစ်သစ်လေ အိမ်မှာစကောမရှိတော့ ဘွားဝင်းကပေးခဲ့တာ သတိရပါသေးတယ် ။ စကောကြီးကိုခွက်ပြီး သစ်သစ်ခေါင်းမှာ ဖိတင်ပေးတာများ သူကနိုင်စေချင်တယ်လေ ။ ပန်းတိုင်ရောက်မှ လက်နဲ့ကိုင်မိလို့ ဒေါ်သစ်သစ်တော့ ရှုံးပါပကောလားနော် ။ အပ်ပေါက်ထိုးပြိုင်ပွဲဆိုလည်း ဒေါ်ဝင်းက ဘေးကသစ်သစ်ကို အော်နေတာပေါ့ ။ သစ်သစ်က အပ်ချည်ကို လျှာနဲ့တို့လို့ကို မဆုံးဘူးလေ ဒါလည်းရှုံးတာပါပဲလေ ။ ခုတော့ ၀င်ပြိုင်ရင်တောင် အားပေးမယ့်သူမရှိတော့ပါဘူးလေ ။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အိမ်မှာ ကားလာမောင်းနေကျ သန်းဇော်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးလည်း ဆုံးသွားပြီလေ ။ သူကတော့ အရက်ရဲ့ကျေးကျွန် ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် ။ ဟိုးအရင်ကားလာမောင်းတုန်းကဆို ထမင်းကျွေးရင်မစားဘူး ပိုက်ဆံရတာနဲ့ နေ့လည်၁နာရီဆိုလည်း သွားသောက်တယ်လေ ။ ခုတော့ သူလည်းဆုံးရှာပြီတဲ့....။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘွားဒေါ်ရှမ်းမပါ ။ တစ်အိမ်ကျော်ကပါပဲ ပိန်ပိန်လေးနဲ့ မြောင်းတွေလုပ် ဈေးသွား ချက်ပြုတ် လုပ်နေတုန်းပဲလေ ။ အိမ်မှာသရက်သီးတွေသီးရင် သူ့ကိုပဲခေါ်ခေါ်ပြီး အမေကပေးတယ်လေ ။ သူကသရက်သီးမှည့်နဲ့ ထမင်းနဲ့ဆို အရမ်းစားကောင်းတယ်ဆိုလို့ ခေါ်ပေးနေကြပေါ့ ။ သစ်သစ်ဘာပြောပြော ဟုတ်လား ဟုတ်လား နဲ့ အမြဲထောက်ခံသူတစ်ဦးပဲလေ ။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌဇနီးပါ မနှစ်က သစ်သစ်ပြန်တုန်းကဆို တကူးတကအိမ်ကိုလာကြည့်ပါတယ် ။ ညီးအေ စင်္ကာပူနဲ့တည့်တယ် ထင်တယ် ၀လာလိုက်တာတဲ့...ဟိဟိ ။ ချော့ကလက်တွေပေးလိုက်လို့တောင် ဆီးချိုရောဂါသည်ကို ချောကလက်ပေးလို့ အမေက သစ်ကိုဆူသေးတယ် ...ဟိဟိ ။ ခုတော့ အားလုံးဆုံးရှာပြီပေါ့လေ သစ်သစ်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင်တော့ ဒီလူတွေမရှိတော့ဘူးလေ ။
ဒါပေမယ့် ရှိနေဦးမယ့် ဟာလ၀ါရောင်းတဲ့ ကြီးမေကြီးတို့ ဘိန်းမုန့်ရောင်းတဲ့ ကြီးတော်ညွန့်တို့ ကတော့ သစ်သစ်လက်စွဲတွေပါပဲ ။ ကြီးမေကြီးရောင်းတဲ့ ဟာလ၀ါကို သူငယ်တန်းကနေ တော်တော်ကြီးတဲ့အထိ ၀ယ်စားနေကြလေ ။ ကျောင်းကပြန်လို့ ဆိုင်ရှေ့ဖြတ်တာနဲ့ ကြီးမေကြီးတစ်ခုဆို ကြီးမယ်လို့ကိုယ့်စိတ်မှာ ထင်တဲ့ အနားသားလေးကို လှီးခိုင်းတတ်တယ်လေ ။ အပေါ်ကအုန်းဆီအနှစ်လေး ဆမ်းလို့ပေါ့ အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ် ။ ဘိန်းမုန့်ရောင်းတဲ့ ဒေါ်ညွန့်ဆိုလည်း ဆောင်းတွင်းချမ်းချမ်းတွေမှာ ကော်ဖီခွက်လေးကိုင်ပြီး အိုးနားမှာနေလိုက်တာ နေထွက်လို့ အနွေးထည်ချွေးစို့မှ အိမ်ပြန်လာတတ်တာလေ ။ အဲဆိုင်မှာ ဘိန်းမုန့်ထိုင်ရောင်းနေတာပေါ့ ။
တကယ်ကို အားလုံးကိုသတိရနေမိတယ် ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက နေခဲ့တဲ့ရပ်ကွပ်လေးဆိုတော့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်တွေလည်း မနည်းပါဘူး ။ နေတုန်းကတော့ ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ဒါတွေပြန်စဉ်းစားရင် တကယ်ကိုလွမ်းမောစရာကောင်းလှပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင်တော့ ခြံထဲမှာခုံတွေခင်းပြီး ဘယ်သူမဆိုဝင်ရောက်စားနိုင်တဲ့အလှူလေးတစ်ခု လုပ်မယ်စဉ်းစားထားပါတယ် ။ အတွေးတွေနဲ့တင် စိတ်မှာပျော်နေမိပါတယ် ။ ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် အလှူလေးဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့....။ ပြန်ချင်ပါဘီ ။
Posted by သစ်သစ် at 9:48 AM6comments
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဟာသလေးတွေ ပို့ပေးပါတယ် ။ ဖတ်ပြီးတော့ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကို ရီလိုက်မိတယ်။ ဒါနဲ့သစ်လည်း သစ်ဆီကိုလာနေကျ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း မျှဝေချင်လို့ ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ် ။ ဘယ်သူရေးတယ် ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး ။ ရယ်မောခြင်းသည် အသက်ရှည်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးတာနဲ့ အားလုံးပဲစိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ ရယ်မောနိုင်ကြစေဖို့ ဖတ်လိုက်ကြစို့နော်...။
ကလေးတစ်ယောက်က လမ်းပေါ်မှာ ငိုနေသတဲ့။
အဲဒါ ..တွေ့တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်က မေးတာပေါ့
ဘာဖြစ်လို့ ငိုနေတာလဲ ကလေး ?
အိမ်မှာ သားဖေဖေနဲ့ မေမေ ရန်ဖြစ်နေလို့ပါလို့ ပြန်ဖြေတယ်တဲ့ ..ကလေးက ။
ဒါနဲ့ အဲဒီလူကြီးက ....သြော်... မငိုပါနဲ့ကွ မင်းအိမ်ကို
ကလေးလေးက ပြန်ဖြေရှာတယ် ...
(( သားဖေဖေကလဲ အဲဒါကိုပဲ မေးမေးပြီး မေမေ့ကို ရိုက်နေတာတဲ့ ))
အမွှာလေးနှစ်ယောက်ကို ရေချိုးပေးပြီး အမေလှည့်ထွက်မယ်အပြုမှာ
ကလေးနှစ်ယောက်ဆီက ရီသံကို ကြားလိုက်တယ်။
အမေ "ဘာလို့ ရီတာလဲ"
အမွှာထဲကတစ်ယောက် "ကိုကို့ကို မေမေ ရေနှစ်ခါချိုးပေးပြီး သားကိုတော့ ချိုးမပေးဘူး
သားငယ်သည် အမေဖြစ်သူအား ရှေ့ကကြည့်လိုက် နောက်ကကြည့်လိုက် ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်နှင့်
အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ကြည့်သည်။ကြာသော် အမေဖြစ်သူ စိတ်မရှည်တော့သည်နှင့်
``ဟဲ့ ကောင်လေး ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကို ဒီလောက်ကြည့်နေတာလဲ။´´
``ဖေဖေ ပြောတာမှန် မမှန်သိချင်လို့ပါ။မေမေ၊ ဖေဖေက အိမ်က အစေခံ မကျော့ကိုပြောတယ်၊
အစ်ကိုဖြစ်သူက ညီဖြစ်သူကို ကွန်ပြူတာသင်ပေးရင်း စိတ်မရှည်တော့သဖြင့် အော်၍…
"ဟေ့ကောင် Cancel လုပ်ဖို့ပြောနေတာ Cancel Cancel !!!!…"
ထိုစဉ် အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် သတင်းစာဖတ်နေသော အဖေဖြစ်သူက…
"သားကြီးရေ ညီလေးကို အဲ့ဒီလောက်ထိ မခိုင်းပါနဲ့ကွာ မနေ့ကဘဲ မောင်ပုကို
ကန်ထဲကနွံတွေရော အကုန်ဆယ်ပြီး ဆေးခိုင်းလိုက်ပြီးပြီ။
တစ်ခါက လူသားစားတဲ့တောက လူရိုင်းသားအဖဟာ အိမ်မှာချက်ဖို့အသားမရှိတော့တာနဲ့ မြီု့အစွန်နားအထိတက်လာကြတယ်။ တွေ့တဲ့သူကိုဖမ်းခေါ်လာပြီး ချက်စားဖို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ လူအရိပ်အခြေစောင့်နေတုန်း သူတို့နားကိုမိန်းမ ပိန်ပိန်တစ်ယောက် ဖြတ်လာတယ်။ သားကမေးတယ်။အဖေ ၊ အဲဒီမိန်းမကို ချက်စားရအောင် ဖမ်းသွားမလားဆိုတော့ အဖေက - နေဦး ဒီမိန်းမက ပိန်လွန်းတယ်။ အရိုးကြီးပဲ။ စားလို့မကောင်းဘူး။ နောက်မိန်းမ၀၀တစ်ယောက်ဖြတ်လာတော သားကမေးတယ်။ အဖေ ၊ ဒီတစ်ယောက်က ၀၀တုတ်တုတ်ကြီး စားလို့ကောင်းမယ်။ ဖမ်းသွားရအောင်။ အဖေကလည်း - ဒီတစ်ယောက်က ၀လွန်းတယ်။ ငါတို့စားလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ စောင့်ကြည့်နေရင်း ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် လှလှပပ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြတ်လာတယ်။ သားကလည်း - အဖေ ၊ ဒီတစ်ယောက်ဆို အနေတော်ပဲ။ ပိန်လည်းမပိန် ၀လည်းမ၀ဘူး။ ဖမ်းသွားရအောင် လို့မေးတယ်။ အဖေကလည်း - ဟုတ်တယ်၊ ဒီတစ်ယောက်ကအတော်ပဲ။ ဖမ်းသွားရအောင်။ အိမ်ရောက်ရင် မင်းအမေကိုချက်စားကြတာပေါ့ သားရယ်။ တဲ့ …
သား - "မေမေ၊ ကနေ့သား ဖေဖေ နဲ့ ဘစ်စ်ကား စီးနေတုန်း ဖေဖေ က သား ထိုင်နေ
တဲ့နေရာကို ဖယ်ခိုင်းပြီး အန်တီကြီး တစ်ယောက်ကို ပေးထိုင်တယ်မေမေရဲ့"
အမေ - "အော် သားရယ်၊ ဒါ ကုသိုလ် ရတဲ့ အလုပ်ပဲလေ ဘာဖြစ်လို.လဲ သားရဲ့"
သား - "သား က ဖေဖေ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတာနော်၊မေမေ"
လင်မယားနှစ်ယောက်တွင် သားလေးယောက်ရှိသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ အကြီးသုံးယောက်မှာ
ဆံပင်နီနီ၊ အသားလတ်လတ်၊ အရပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်သည်။ အငယ်ဆုံးမှာ ဆံပင်နက်နက်နှင့်
အရပ် ပုပုဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသည် နောက်ဆုံးတွင် မကျန်းမမာဖြစ်ပြီး သေလုဆဲဆဲတွင်
ဇနီးဖြစ်သူကို သေချာ မေးလိုက်သည်။
-အချစ်ရယ် ကိုယ်မသေခင် ကိုယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား ပြောစမ်းပါ။ အငယ်ဆုံး သားလေးက
ထိုစကားကို ကြားပြီးသည်နှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ပြုံးလျှက် ကွယ်လွန်သွားသည်။
ထိုအခါ ဇနီးဖြစ်သူက ရေရွတ်ပြောဆို လိုက်သည်။
တော်သေးတာပေါ့ ... တခြား သုံးယောက်ကို မေးမသွားလို့
အထူးစည်းကမ်းတင်းကြပ်သည်ဟု နာမည်ကြီးသော လန်ဒန်မြို့ရှိ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားကျောင်း တစ်ခုသို့ တွမ်.. ဆိုသူ ကျောင်းသားအသစ်တစ်ယောက်ရောက်ရှိလာသည်။ ဤကျောင်းသည် စည်းကမ်းကြီးလှကြောင်း မိဘများသို့ စာရေးလျှင် မလိုအပ်သည်များကို မရေးသင့်ကြောင်း ကျောင်းသားကြီးများက တွမ် ကိုသတိပေးသည်။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင် တွမ်.. ထံမှ ပထမဆုံးစာကို တွမ်မိဘများလက်ခံရရှိကြသည်။
"ဖေဖေ.. မေမေတို့ခင်ဗျား... ကျွန်တော်တို့၏ ကျောင်းတွင် ကျောင်းသားပေါင်း
ကျောင်းသားဦးရေ ၃၈၆ ယောက်သာဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒ ကျွန်တော့တွင်
Posted by သစ်သစ် at 8:51 PM 8 comments
သစ်ရင်ထဲမှာ မိဘဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိနေပေမယ့် ဒီပိတ်ရက်မှာ သစ် မေမေ့ကိုတော်တော် သတိရနေတယ် ။ မေမေကို ဖုန်းပြောချင်ပေမယ့်လေ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်း ၃ရက်လောက်ဆက်ထားတော့ မေမေဆူမှာစိုးလို့ ထပ်မဆက်ဖြစ်ဘူး ။ စိတ်တွေဟာ ကျဆင်းပြီးညဆိုရင်လည်း တယောက်တည်းအထီးကျန်စွာ နေရခြင်းကို စိတ်တိုနေမိတတ်တယ် ။
အွန်လိုင်းဆိုတာလည်း မ၀င်ချင်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်တွေသွားပြီး အချိန်တွေကုန်အောင်လုပ်နေမိတယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟိုးအရင်ကအကြောင်းတွေပြောရင်း ရီမောနေပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အခန်းပြန်ရောက်ရင် အိပ်ယာပေါ်တက်ခွေပြီး ဘာမှမလုပ်ချင်လောက်အောင် စိတ်ဓါတ်တွေကျနေမိတယ် ။ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက မေမေ့အနားမှာ ဒီကအလုပ်တွေအကြောင်း လူတွေအကြောင်း အွန်လိုင်းအကြောင်း ပညာရေးအကြောင်းတွေ ထိုင်ပြောချင်နေမိတယ် ။
သမီးဒီမှာ မနေချင်တော့ဘူး မေမေလို့ မေမေ့မျက်နှာကြည့်ပြီး ပြောချင်နေတယ် ။ မေမေ့လက်မောင်းကို ကိုင်ပြီး သမီးသိထားတဲ့ လောကရဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြချင်တယ် ။ မေမေ့ရီသံကို ကြားချင်နေတယ် နေကောင်းအောင်နေနော်ဆိုတဲ့ မေမေရဲ့စိုးရိမ်တတ်တဲ့ မျက်ဝန်းလေးကို မလွတ်တမ်းလေး ကြည့်ချင်နေမိတယ် ။ မေမေချက်တဲ့ အရင်ကမေမေ့ဟင်းက ဒါပဲလားဆိုတဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက် နဲ့ ငါးဟင်းလေးကိုလည်း တရှိုက်မက်မက် စားချင်နေတယ် ။ နင်မငယ်တော့ဘူးနော် စိတ်ဓါတ်ကိုရင့်ကျက်တော့ဆိုတဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ချင်တယ် ။
မေမေမသိအောင် လမ်းထိပ်က ကြက်သားသုတ်ကိုလည်း ခိုးစားချင်သေးတယ် ။ တော်တော်ချက်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သမီးလက်ရာတွေကိုလည်း ချက်ကျွေးချင်နေမိတယ် ။ မေမေမလိုက်ရင် ဆေးခန်းမသွားတဲ့သမီးလေ ခုဆိုဆေးခန်းမှာလဲ တစ်ယောက်တည်းပဲ သိလားမေမေ ။ နေမကောင်းလို့ ဆန်ပြုတ်စားချင်ရင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာပဲလုပ်စားနေရတယ် ။ သက်သာရဲ့လားလို့ မေးမယ့်သူတောင် မရှိတဲ့ဘ၀မှာ ငါဟာဆွေမရှိမျိုးမရှိ တစ်ကောင်ကြွက်လိုဖြစ်နေပါလားလို့ ခံစားချက်ကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
သမီးဘာကြောင့် မေမေနဲ့အဝေးမှာနေရတာလဲ ...။ မောင်နှစ်မတွေမှာ သမီးကျမှဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ....။ မေမေ့အနားမှာနေခွင့်မရှိအောင် ဟိုဘ၀ကသမီးဘာတွေလုပ်ခဲ့မိလို့လဲ.....။ ၀ဋ်ကြွေးရှိရင်လည်း ကျေပါစေတော့မေမေရယ် ။ အဝေးမှာနေလို့ သမီးမေမေ့အပေါ် တာဝန်မကျေတာများ ရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။ နောက်ဘ၀မှာ ဒီလိုမိသားစုနဲ့ခွဲနေရခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲကနေ ကင်းလွတ်ရပါစေကြောင်း ဘုရားထံပါးမှာ နေ့စဉ်ဆုတောင်း မိပါတယ် မေမေရယ် ။ သူများတွေမသိအောင် မေမေ့ကို တိုးတိုးလေးပြောပြမယ်နော် ..... ဒီပို့စ်ကို ဒီမနက်ရုံးရောက်ရောက်ခြင်း အစအဆုံးမျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးနေတာကို ဖေဖေမသိပါစေနဲ့နော် မေမေ ......... ။ မေမေ့ကို အရမ်းလွမ်းနေတယ် ။
Posted by သစ်သစ် at 8:58 AM 8 comments
မနက်ဖြန် နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့ဟာဆိုရင် သစ်သစ်အစ်ကိုရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေးဖြစ်ပါတယ် ။ မိသားစုနဲ့ဝေးရာလေးမှာနေပြီး ဘ၀တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းအတွက် အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ သစ်အစ်ကိုအတွက် အမှတ်တရပို့စ်လေးကို ည၁၂နာရီကျော်နောက်ရက်ကူးတဲ့အချိန်လေးအထိစောင့်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ် ။
ကဗျာဆိုတာထက် စာစုလေးတစ်ခုကို ရေးခြစ်လိုက်မိတာကတော့........
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကတည်းက ရေးလိုက်ဖျက်လိုက် စာစုလေး ရေးတုန်းကတော့ စာပိုဒ်တွေအများကြီးပါပဲ ။ ဟိုဖြုတ်ဒီဖြုတ်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ် အစ်ကိုရေ....။ လူတိုင်းအပေါ်မှာ မှန်ကန်တဲ့စေတနာနဲ့ အကူအညီပေးရင်း တည်ငြိမ်စွာဖြင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘ၀ခရီးတစ်ခုကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရင်း ဘာသာသာသနာအကျိုးကို ဆထက်တပိုးထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ညီမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ စိတ်၏ပျော်ရွှင်ခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ ပြည့်စုံပြီး ခုနှစ်မှာကျရောက်တဲ့မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်၁၂၀တိုင် အစ်ကိုချစ်တဲ့ မိသားစုလေးနဲ့အတူတကွ အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့လည်း ထပ်လောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အစ်ကို....။နောက်ထပ်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေး ပေးချင်တာကတော့ အစ်ကိုကိုယ်တိုင် ကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့အရာတွေပါပဲ...။
အင်း အသားရောင်ဦးထုပ်လေးပါလား ကြိုက်လိုက်တာ...မှတ်ထား ညီမ အစ်ကိုအကြိုက်ဆုံးအရောင်က အသားရောင်လေးပဲ....နာမည်လေးပါတဲ့ အသားရောင်ဦးထုပ်လေးကို အွန်လိုင်းကနေမရမက လိုက်ရှာထားတာပါ ။ ကြိုက်နှစ်သက်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီညနေ ဘာစားရမလဲဆိုတော့ အင်း...၀က်သား နဲ့ ခရမ်းသီးနှပ်လေတဲ့...အစ်ကိုဆိုအဲဒီဟင်းနဲ့ထမင်းစားရန် ၂ပန်းကန်တော့အနည်းဆုံးပဲဆိုတဲ့ စကားသံကို ဒီပို့စ်အတွက် ဒီနေ့ချက်ရင်း ကြားယောင်နေမိတယ် ။ အစ်ကို့အကြိုက် သုံးထပ်သားနဲ့ချက်လိုက်တယ် ။ ဒါလည်းကြိုက်မယ် ထင်ပါတယ် ။
ကောက်ညှင်းပေါင်း စင်္ကာပူမှာအလွယ်တကူရလားတဲ့ ကိုယ် ကောက်ညှင်းပေါင်းစားချင်လိုက်တာဆိုလို့ မမေ့မလျော့တင်ပေးလိုက်တယ်နော် ။ ( စနေမနက်ကမှ ကောက်ညှင်းပေါင်းကိုအုန်းသီးနိုင်ချင်းနဲ့ဝယ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးတဲ့ ရန်ကုန်ကမမကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ် ) ။
Posted by သစ်သစ် at 9:58 PM 8 comments
သစ်သစ်တစ်ယောက် စလုံးကိုရောက်ကတည်းက ဖြစ်သလိုစားလာခဲ့တာ ကြာပါပြီ ။ ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာဆိုလည်း အနီးအနားက စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ တရုတ်လိုလို ကုလားလိုလို ဂျပန်လိုလို နဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ ကြာပြီလေ..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သနားလွန်းလို့ ပိတ်ရက်တွေဆိုလည်း စိတ်ကိုအလိုလိုက်ရတာလည်း ၂နှစ်ကျော်ပါပြီ...ဟိ ။ ခုအစားအသောက်လေးတွေ ဘယ်လိုဖြစ်သလိုစားရတယ် ဆိုတာကို ချစ်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗစ် ၊ ထော ၊ မျိုး ၊ ဂျင်ဆမ်းပိုး ၊ ညည လေးတို့အတွက် စုတ်ချာလှသော ကင်မလာလေးနဲ့ လက်တည့်စမ်းလာတဲ့ ဓါတ်ပုံအစုတ်လေးများသုံးပြီး ပို့စ်တစ်ပုဒ်ထပ်မံတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းများက ကွန်မန့်များကို ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ရေးချင်လို့ အတင်းပူဆာသဖြင့် အရူးများစိတ်ချမ်းသာအောင် ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ကုလားစာလေးကလည်း တစ်ပတ်၂ခေါက်လောက်စားဖြစ်တယ် သောကြာဆို အသီးတစ်မျိုးအလကားရလို့ မမေးနဲ့ကုလားစာပဲ
ဂျပန်စာလေးကတော့ ဈေးကြီးလို့တစ်ပတ်တစ်ခါ အနိုင်နိုင်ပါလေ
ဟိုတစ်ပတ်က ထမင်းစားပျက်လို့ သွားစားတဲ့ ကြက်သားကုန်းဘောင်ကြီးကြော်
ဒါက၀က်သားနဲ့ ပဲငပိဆိုပဲ သူလည်းမဆိုးဘူး
ဒါကတော့ စိတ်ပါရင်ပိတ်ရက်ဆိုစားဖြစ်တဲ့ ပေကြောင်ကြောင်လက်သုတ်စုံလေး
၁လ တစ်ခါလောက်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးသွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်
သူငယ်ချင်းတွေပြောလွန်းလို့ ဒီမနက်သုတ်စားတဲ့ မြန်မာလက်ဖက်လေး
သစ်သစ်ဘလော့မှာ သူငယ်ချင်းများနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ စကြနောက်ကြစေရန် ပို့စ်လေးများဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် စာဖတ်သူတို့အတွက် တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပဲ အချိန်တစ်ခုပေးပြီး လာရောက်ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ် ။ ပို့စ်တိုင်းသည် သစ်သစ်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
Posted by သစ်သစ် at 12:25 PM 17 comments
သစ်သစ် စာရေးတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာ တစ်ပတ်လောက်ရှိသွားတယ် ။ လာလည်တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အသစ်မရှိလည်း အမြဲလိုလိုလာလည်ကြလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ် ။ ဒီနေ့သစ်သစ် ဆရာ့အိမ်မှာ အလုပ်စ၀င်တုန်းက အမှတ်တရလေးတွေ ရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ။
သစ်တို့ ၄ယောက် ဆရာ့စီမှာ အလုပ်လုပ်ကြတာလပိုင်းလောက် ရှိလာပြီဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ဆရာ့အထာသိလာတာပေါ့နော် ။ ဒါပေမယ့်ကြောက်တာကတော့ အရှိန်မပြယ်သေးပါဘူး ။ ဆရာရှိနေရင်သာ ငြိမ်နေကြတာ ဆရာဆိုဒ်ထဲသွားပြီဆို လာထားပဲအလုပ်တွေကလည်းလုပ် စကားတွေကလည်း ပေါက်ပေါက်ဖောက်အောင်ပြောနေကြတာပေါ့နော် ။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲ တစ်နေ့တော့ ဆရာပြန်မလာခင် ဖောင်ဒေးရှင်းပုံတွေ သစ်သစ်ကဆွဲထားတဲ့ ပရော့ဂျက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့..။
ဆရာပြန်လာတော့ အဲဒီပရော့ဂျက်အပ်ထားတဲ့သူလည်း ဆရာနဲ့အတူပါလာတာပေါ့နော် ။ ဆရာကနည်းနည်းလေးစစ်လိုက်တယ် အဲမှာသစ်ရဲ့မဟာအမှားကို သွားတွေ့ပါတယ် သံချောင်းကိုသစ်သစ်ကပြောင်းပြန်ထည့်ထားတာပါ ။ ဆရာကသစ်သစ်ကို ဟ...သံချောင်းထည့်တာမှားနေတယ် ပြန်ထည့်ပြီး ပြန်ဆွဲမြန်မြန်လုပ် ပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာစိတ်အေးလက်အေးဆွဲနေတုန်းကအဟုတ်သား ဆရာကလေသံမာမာနဲ့အဲလိုလူရှေ့ပြောရမလားဆိုပြီး စိတ်ဆိုးတာအရမ်းပဲလေ.။
ပုံကိုဆွဲပြီးတာနဲ့ဆရာ့ကိုပေးပြီး အိမ်နောက်ခန်းထဲဝင်နေလိုက်တယ် ။ ထမင်းစားပြီးတော့ မျက်ရည်ကကျလို့ သူငယ်ချင်းတွေကချော့ကျတယ်လေ ဆရာကတော့ သစ်သစ်စိတ်ဆိုးမှန်းတောင် မသိပါဘူးလေ ။ သူလည်းသစ်တို့စားပြီးတာနဲ့ သူလည်းစားပြီး အိပ်တယ်လေ သူ့အခန်းကိုဝင်သွားတာနဲ့ သစ်ကလည်းဒီဘက်ကဆရာ့ညီမအခန်းကို ၀င်သွားပြီးအိပ်လိုက်တာ ဆရာနိုးတာတောင် သစ်သစ်မနိုးပါဘူး ။ ဆရာကမေးတော့ သစ်နေမကောင်းလို့အိပ်နေတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကပြောကြတာပေါ့နော် ။ဆရာကတောင် ဟုတ်လား ဆေးခန်းသွားမယ်လုပ်သေးတယ်....ဟိဟိ ။
သူငယ်ချင်းတွေပြန်တော့လည်း ဒေါ်ရွှေသစ်မပြန်ပဲ ဆက်အိပ်နေတာပဲလေ ။ အိမ်ကိုလာကြိုဖို့ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့အထဲမှာပဲ ပေတေနေနေတာလေ ။ သစ်အိမ်ကလာကြိုတဲ့ကားကိုမြင်တော့ ဆရာက အိမ်ကတောင်လာကြိုရတယ် တော်တော်ဖြစ်နေတာလားလို့ သူ့ညီမကိုမေးတယ်လေ ။ သစ်သစ်မျက်နှာကတော့ စူပုပ်နေတာပဲပေါ့ ။ အစ်ကိုလာကြိုပြီဆိုတော့ အခန်းကနေ၀ုန်းခနဲထွက်ပြီး ဆရာ့နားကိုသွားတယ် ဘာပြောလိုက်တယ်ထင်ပါသလဲ ဆရာဆူလို့ စိတ်ကောက်နေတာသိရဲ့လားလို့ ပြောပြီး တိုက်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့တယ် ။ ဆရာတစ်ယောက်လည်း ဟော...ဗျာ ဆိုပြီး ကျန်ခဲ့တာလေ ။
နောက်နေ့ကျတော့လည်း မျက်နှာကတင်းပြီး အလုပ်သွားတယ်နော် ။ ဆရာကစကားပြောချင်လို့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ လိုက်ကြည့်လို့ ဒီကတော့ တင်းတင်းပဲ..... သူငယ်ချင်းတွေက ကြားကပေါ့ ။ နောက်တော့ဆရာက ဒါကဒီလိုဆွဲရတာ ဒါကိုဒီလိုယူရတယ်လို့ လာရှင်းပြတော့ ဘာပြောလိုက်တယ်ထင်လဲ စောစောကတည်းက အဲလိုရှင်းပါလားလို့ ဘာလို့ဧည့်သည်ရှေ့မှာအော်လည်း ပြောလိုက်တယ် ။ ကဲကဲ နောက်မပြောတော့ဘူးဆိုပြီး ပွဲသိမ်းသွားတယ်လေ ။
သစ်သစ် ဆရာ့အပေါ်တော်တော်ဆိုးခဲ့ပါတယ် ။ မိန်းကလေး၎ယောက်နဲ့ ဆရာ့မှာတော်တော်ကိုချာချာလည်ခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ယောက်တစ်မျိုးကောက်ကြတာပါ ။ နောက်ပိုင်းဆရာက ဘယ်သူကဘယ်လိုအထာသိသွားတော့မှ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဘာပဲဖြစ့်ဖစ် ပညာမျိုးစုံကိုဆရာစားမချန် ရခဲ့သလို စိတ်ထားကောင်းတဲ့ဆရာကို ကိုယ့်အမျိုးအရင်းလိုကို သတ်မှတ်မိပါတယ် ။ ခုတောင် ဒီမှာစိတ်တွေညစ်လို့ ဖုန်းဆက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဆရာကပြန်လာဘာမှစိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ ကိုယ့်ပညာကထမင်းတော့မငတ်ဘူး ။ သူဌေးသာမဖြစ်ရင်ရှိမယ် ဆိုပြီး အားပေးတတ်တဲ့ဆရာပါ ။ ဒီပို့စ်လေးရေးရင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလေးတွေကို တော်တော်ပြန်သတိရသွားမိပါတယ် ။
Posted by သစ်သစ် at 9:13 AM4comments